अब देश निर्माणको संकल्प ब्युझनु पर्छ - Dainik Nepal
अब देश निर्माणको संकल्प ब्युझनु पर्छ
दैनिक नेपाल २०७७ जेठ ६ गते ६:५२
डिल्ली राम अम्माई
मानिसको श्रम र दिमाग अरु देशले किन्नु, बेचिनु वा कुनै कारणले दक्ष जनशक्ति क्रमश मुलुकबाहिर पलायन हुँदै जानु भनेको कालान्तरमा देश सकिनु हो । त्यसैले राज्यले गतिलो नीति बनाएर देश निर्माणको महत्वपूर्ण जनशक्तिलाई बाहिरिन दिनु हुँदैन । यदि कुनै कारणले कुनै कालखण्डमा बाहिरिन पुगेको रहेछ भनेपनि उसलाई देश भित्र ल्याउने नीतिगत ढोका बनाउनु जरुरी हुन्छ । देश भित्रका नागरिकबीच कति कर्तव्यहीन अनागरिक छन् र देश बाहिरका नेपालीहरुबीच कति कर्तव्यनिष्ठ नागरिक छन् अब छुट्ट्याउन जरुरी छ । मुलुकको समृद्धि अभियानभित्र र बाहिरबाट सांस्कृतिक क्रान्तिलाई नजोडी नहुने अबस्था छ । ओम्निको ८० टन स्वास्थ्य सामाग्रीमा कमिसन यान्त्रणा, चीनले जिटुजि अस्विकार गर्दा पनि कमिसनको खेलमा विमान चार्टर,शंकर ग्रुपका मालिक सुलभ अग्रवालहरुको धन्दाहरु हेर्दा मुलुकले चरित्र रुपान्तरणको लागि अर्को साँस्कृतिक क्रान्तिको माग गरेको हो कि जस्तो लाग्छ।
यो बेला भनेको नेपालमा योजना बनाएर प्रविधी भित्र्याउने समय हो । समयको अनुबन्धमा दक्ष नेपालीहरुलाई नेपाल फर्कन आह्वान गरिनु पर्छ , फिजीमा रहेका उखुखेती विशेषज्ञदेखि अमेरिका, क्यानाडा, ब्रुनाईका खाध्य बिज्ञ, बैज्ञानिक र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई एउटै नीति बनाएर नेपाल आमन्त्रण गर्न अब ढिलाई गर्नु हुँदैन । नेपालीहरुले मध्यपूर्व, लगायत संसारभरी पूर्ण सीप पनि लिएर गएका थिएनन् । समर्पण भावना र देशभक्ति त झन् लिएर गएका थिएनन् । केवल पेटको बाध्यता र ऋणले थिचिएको निरास शरिर लिएर गएका थिए । तर अहिले हेरौं त,उनीहरुले पसिना बगाएका देशहरुमा स्वर्गका फूलहरु फुलिरहेका छन् ।
नेपालीहरु नेपाल फर्केर आएभने निखारिएको सीप मात्रै लिएर आउने छैनन्, समर्पण र देशभक्ति भावना पनि लिएर आउने छन् । त्यसैले पुस्तौनी लिखत र समयको गतिलाई सिमा रेखाले काटेर पबित्र देशभक्तिलाई विभाजित गर्नु दुर्भाग्य हुन्छ। अमेरिका र युरोपले झैँ सबै दक्षताहरु किन्ने हैसियत नभएपनि आफ्ना नागरिकहरुमा निहित सीपहरु सम्पतिमा बदल्ने हैसियत राज्यले अब राख्नैपर्छ ।
गलत नीति र अभ्यासकै कारण राज्यकै लगानीबाट बनेका दक्ष नागरिकहरु मुलुकबाट कसरी पलायन भैरहेका छन् ? नेपाल सरकारको रेकर्डमा छकि छैन कुन्नि ? ‘केहि वर्ष अघि कोलम्बो प्लान अन्तर्गत देशभरि पाकिस्तान सरकारले प्रदान गरेको २४ जना पाइलट तथा १८ जना इन्जिनियरले तालिम लिएर स्वदेश फर्केपछि मात्रै विदेशी पाइलटहरू विस्थापित भएका थिए । यी तमाम पदमा नेपाली मात्रको संलग्नता तथा विदेशीको विस्थापनबाट उड्डयन क्षेत्रमा प्राप्त आत्मनिर्भरताले अन्य क्षेत्रमा पनि आत्मनिर्भर बन्न प्रोत्साहित गर्यो । तर अहिले अवस्था उल्टिदै छ । यो सबै राज्य पक्षले हेक्का राख्ने पर्छ।
राज्यले सुधार्न सक्ने तर चासो नदेखाएका माफियातन्त्रका यस्तै उदाहरणहरुले हामीलाई ज्यादै दुखित बनाएको छ । निगमले सन् १९८७/८८ मा अमेरिकाको बोइङ कम्पनीसँग खरिद गरेको ७५७ विमानको मूल्य लगभग साढे पाँच करोड अमेरिकी डलर थियो। सोही समय चीन सरकारले पनि त्यस्तै विमान साढे तीन करोड डलरमा किनेको थियो । उक्त ७५७ विमान उडाउने तालिम लिन अमेरिकाको सियाटल गएका नेपाली (पाइलट, इन्जिनियर) को जम्काभेट सोही विमानमा तालिम लिन गएका अन्य राष्ट्रहरूका पाइलट—इन्जिनियरसँग भयो । बोइङ ७५७ जहाजको तालिम सकेर लगभग एकै समय आफ्नो देश फर्केका नेपाली पाइलटले त उक्त बोइङ ७५७ विमान आफैं उडाए तर अमेरिकाबाट बोइङ ७५७ विमान मर्मतसम्भार गर्ने तालिम सकेर आएका नेपाली इन्जिनियरहरूलाई उक्त जहाज मर्मतसम्भार गर्न दिइएन । बरु तत्कालीन निगम व्यवस्थापनले हङकङको एउटा कम्पनीलाई मर्मतसम्भारको ठेक्का सुम्पेको थियो । अमेरिकामा नेपालीसँगै तालिम लिएका चिनियाँ इन्जिनियरले भने आफैँ गजबले जहाज मर्मत गरे । यो सबै राज्य संलग्न भएर गरिने भ्रष्टाचारका लागि थियो भन्ने कुरा यो घटनाले पुष्टि गर्छ । नेपाली कर्मचारीलाई मर्मत गर्न लगाए कमिसन नआउने भएर त्यसो गरिएको बुझिन आएको छ।
बहुदल आएपछि राजनीतिको आडमा मौलाएको भ्रष्टाचारको अवस्था झन् भयाबह छ । बिसं २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् बहुदलका विभिन्न सरकारका पालामा त हवाई माफियाहरूको खुला बजार बन्न गयो निगम । धमिजाकाण्ड, साउथ चाइना काण्ड हुँदै निगमलाई जमिनको धुलो चटाउने लाउडा काण्ड भयो । सोही काण्डमा कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आयोगसमक्ष बयान गराउन तत्कालीन निगम व्यवस्थापनले निगमको बिल्डिङमै उभ्याउन बाध्य गराएका थिए । उड्डयन क्षेत्रमा अन्यन्त कडा परिश्रमका साथ राष्ट्रले गौरव गर्नलायक आत्मनिर्भरतालाई समाप्त पार्दै यस क्षेत्रमा घुसेका माफियाले ४ फेब्रुअरी १९९२ देखि लाउडा विमानको विनाशलीला समाप्त नभएसम्म आठ वर्ष निरन्तर १९ पटकसम्म विदेशी विमान भाडामा ल्याउने र विदेशी पाइलट भित्र्याउने गरे । त्यसले नेपालको आर्थिक भ्रष्टाचारलाई निर्दयतापूर्वक बढाएर निगमलाई थला पार्यो ।
अहिलेसम्म पनि उड्डयन विभागको मिलोमोतोमा सबै नेता र उच्च पदस्थहरुको मुखमा बुझो हाल्न र निकट भविष्यमा निगमका बोइङ ७५७ विमानहरु नै बेच्दै जाने योजना बनाएर अझ बढी कमाउन माफियाहरु कटिबद्ध छन् । यो अवस्थाको सुधारको लागि सम्बन्धित निकायको चासोले मात्रै पुग्दैन । संकल्प सहित माफिया बिरुद्ध कारवाहीको प्रक्रिया तुरुन्त थालनी गर्नु जरुरी हुन्छ ।
यो त एक उदाहरण मात्र हो । नेपालका सबै क्षेत्रको अवस्था स्वास्थ्य क्षेत्र वा निगमको भन्दा भिन्न छैन। त्यसैले अब राज्यले देशभक्त स्वयंसेवक, स्वास्थ्यकर्मी लगायत दक्ष नागरिकहरुको लगत राख्दै योग्यता अनुसारको काम दिनु पर्दछ। प्रबासिहरुलाई रोजगारीको योजनासहित मुलुक आमन्त्रण गर्ने वातावरण बनाउदै जानु पर्दछ।
एक सर्बे अनुसार,सन् २०२०को जनवरी अगाडिसम्म दैनिक करिब १ हजार ५ सयभन्दा बढी नेपाली युवाहरु विदेशिने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो । विभिन्न संस्थाहरुले विदेशमा गएर काम गर्ने नेपाली कामदारको संख्या ५० लाखको हाराहारी भएको दावी गरिरहदा सरकारले भने सरकारी श्रम स्वीकृति लिएर ३१ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारमा गएको तथ्य बाहिर ल्याएको देखिन्छ । व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा श्रम तथा यातायात राज्यमन्त्रीले जानकारी उपलब्ध गराउनु भएको तथ्यांकमा अबैधरुपमा वैदेशिक रोजगारीमा काम गर्न गएका र भारतमा काम गर्दै गरेका नेपालीको संख्या परेको छैन ।
यदि त्यो संख्या पनि जोड्ने हो भने करिब ५० लाख नेपाली बिदेशमा आफ्नो पसिना बगाइरहेका छन् । जुन हाम्रो कुल जनसंख्याको करिब २५% प्रतिशत हुन आउँछ । कतार, मलेसिया, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन, ओमन, दक्षिण कोरिया, लेबनान, इजरायल, अफगानिस्तान र जापान वैदेशिक रोजगारीका लागि मुख्य गन्तव्य बनेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जानेमध्ये १ दशमलव ५ प्रतिशत दक्ष, २४ प्रतिशत अर्धदक्ष तथा ७४ दशमलव ५ प्रतिशत अदक्ष मजदुर छन् । यिनै श्रमजीबीहरुको पसिनाबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान २३% रहेको छ।
त्यस्तै अर्को एक रिपोर्टले भन्छ,पछिल्ला वर्षहरूमा हरेक दिन सयौँ नेपाली विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने गर्छन । तर, तीमध्ये उच्च शिक्षा अध्ययन गरी दक्ष बनेर कति जना नेपाल फर्कन्छन् भन्ने तथ्यांक भने कतै राखिएको छैन । बाहना अध्ययनको भए पनि प्रमुख उद्देश्य भने रोजगारी र पैसा कमाउने हुने गरेको छ । कम्तीमा कक्षा १२ सम्मको पढाइ सकाएका विद्यार्थीहरूले बाँकी अध्ययन नेपालमा गर्न छाडेजस्तै भएको छ। यी कुराहरुको पनि अब राज्यले अनुसंधान गरि उनीहरुलाई शिक्षा आर्जनपछि रोजगारको ग्यारेन्टी सहित देश फर्कने वातावरण बनाउन जरुरि छ।
एनआरएनहरुलाई क्रमश नेपाल फर्काउने केहि बाटाहरु हुन सक्छन। जस्तोकि
१) उच्च शिक्षापछि रोजगारीको ग्यारेन्टी
२) लगानीको लागि प्रोत्सहान र अवसर
३ ) मातृभूमिको रुपान्तरण अभियानको लागि स्वयम् सेवा महाअभियान
४ ) नेपाली बैज्ञानिकहरुको लागि बृहद अनुसन्धान क्षेत्रहरुको निर्माण र
५ ) अमेरिकाको जस्तो खुला डिभी प्रणाली नभए पनि विना विभेद दक्ष नेपालीहरुको लागि सुविधा र सम्मानपूर्ण आमन्त्रण नीति
एनआरएनहरु पनि नागरिक र अनागरिक भनेजस्तै दुई किसिमका छन्। कोही नेपाली देश वा समुदायको हितमा आफ्नो हित जोडिएको देख्नेहरु छन् र प्रवासका नेपाली समुदायप्रति लगाव राख्छन। तर कोहि देशको बिपत्तिमा ओम्नी र अग्रवालले जस्तै नाफा देख्नेहरु पनि छन्। लगानीको हिसाबले केहि देश र समुदायप्रति कृपा गरेको सम्झने नब धनाड्य एनआरएनहरुको नाफामुलक क्षेत्रमा ८०% देखिन्छ भने परोपकार,सेवामा लाप्राक बस्ति निर्माण लगायत २०%लगानी रहेको देखिन्छ। सबैतिर एनआरएनको नेपालमा कति लगानी छ भन्ने सवालमा आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले गरेको एक अध्ययन अनुसार अहिलेसम्म नौ जिल्लामा करिब नौ देखि बाह्र अर्ब रुपैयाँको लगानी देखिएको छ ।
‘देश निर्माण हुन सपनाले झक्झक्याएर मात्र पुग्दैन देश निर्माणको संकल्प ब्युझनु पर्छ’
जस्तोकि नयाँ जीवनको सुरुवात् नयाँ कर्मबाट हुन्छ र नयाँ कर्म समर्पित सपनाबाट। ति मृत सपनाहरु कुनै संयोगबस हुने दुर्घटना, परिघटना र आकस्मिक झंझनाहटले ब्युझिञ्छन। देश वा समुदायप्रति समर्पणको भावना पनि मर्दै ब्युतिदै गर्ने सपना हो। आशाका फूलहरु न ओईलाउदै नेतृत्वले योजना सहित विकासको धुन समात्यो भने देश अघि बढ्छ। त्यसबारे अल्फ्रेड नोबेलको जीवनमा घटित एक रोचक प्रसङ्गबाट सिक्न सक्छौँ । नोबेल पुरस्कारका संस्थापक अल्फ्रेड नोबेलको सपना पनि त्यस्तै एक आकस्मिक झंझनाहटले जागृत भएको थियो। उनका दाजु लुडभिग नोबेलको मृत्यु सन् १८८८ मा फ्रान्समा भएको थियो। त्यसबेला कुनै एउटा फ्रान्सेली पत्रिकाले दाजु लुडभिगको समवेदना छाप्ने क्रममे गल्तीले भाई अल्फ्रेड नोबेलको समवेदना छाप्यो। त्यसमा नोबेललाई डाइनामाइटको आविष्कार गरेकामा भर्त्सना गर्दै “मृत्युका मसिहाको मृत्यु” भनी समवेदना छापिएको थियो। यो समवेदना पढेपछि अल्फ्रेड झस्किए र आफूलाई संसारले मृत्युको देवता भनी सम्झिने रहेछ भन्ने उनलाई लाग्यो। उनले विश्वले आफूलाई त्यसरी सम्झियोस् भन्ने चाहेनन्। त्यसपछि उनले आफ्नो काम, सम्पत्ति, आविष्कार आदिबाट कमाएको अकूत सम्पत्तिले नोबेल पुरस्कारको स्थापना गरे। त्यो पनि अल्फ्रेड नोबेलको जागृत धुन वा लहडको परिणाम थियो। उनले सपना जागेपछि मर्न दिएनन र त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै स्मरणीय दीर्घकालिक अभियानमा बदले।
राष्ट्रप्रति संकल्पित नेतृत्व र राष्ट्र निर्माणका व्यवहारिक योजनाहरुको तर्जुमा
देश योजनाले बन्ने हो । त्यसको प्रारम्भिक काम दक्ष नागरिकहरुको लागतबाट शुरु गरिन्छ भन्दछन स्पर्टिजहरु। देशको लागि तत्काल कति दक्ष जनशक्तिको आवश्यक छ ? दुई वा पाँच वर्षपछि कुन कुन क्षेत्रमा कति जनशक्तिको आवश्यक हुने छ र त्यसको आपूर्ति गर्ने माध्याम के हुन सक्ला ? आदिबारे विकसित देशहरुले निक्र्योल गर्दछन। विकसित देशमा विकास मोडेलहरूबारे बहस मात्रै हुदैन निष्कर्ष सहित नीति निर्माणको तयारि पनि हुदै जान्छ। आवश्यक तयारी अनुसार कति आइटी, स्वास्थ्यकर्मी,निर्माण बिज्ञ, कृषि,भौतिक, जैविक लगायत बैज्ञानिकहरु, औधोगिक दक्षहरुको तयारी गरिन्छ ।
स्कुल, कलेज वा तालिमको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा आवश्यक्ता अनुसार भर्ना गरिन्छ। अनि त्यो प्रक्रिया क्रमश प्रणालीकै रुपमा विकास हुन्छ र देशमा बहुआयामिक विकासको गति कहिल्यै अबरुद्ध हुँदैन। त्यसैले शुरुको अवस्थामा योजना कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणले बाटो समात्यो भने देश बन्न बेर लाग्दैन। योजना विदहरुका अनुसार विकास योजनाको निर्माण र दक्ष जनशक्तिको लागतमध्ये पहिलो काम दक्ष शक्ति लागत नै हो। त्यसले कुन क्षेत्रको जनशक्ति अतिरिक्त मूल्य तिरेर आयात गर्नु पर्दैन त्यहि अनुसारको योजना निर्माणमा सहयोग पुर्याउछ। जापानी दक्षहरु भन्दछन, ‘बाहिरको जनशक्ति तालिमको लागि र नभई नहुने अवस्थामा मात्र खोज नत्र आफ्नै आन्तरिक जनशक्ति परिचालन गर।’
जनशक्ति र लागत
देशभित्रको जनचरित्र दुई किसिमको छ। नागरिक वा अगुवाहरु पनि स्वभाबत दुइ चरित्रका छन्। देशभक्त गजेन्द्र सरहरु जसले बर्षौसम्म बेतलबी स्वयम् सेवा गरेर स्कुलको गुणात्मक रुपान्तरण गरे। उनीहरु मुलुकको प्रगतिका भरपर्दा आधार मात्र नभएर अग्रजहरुका अपेक्षा वा समुदायको भबिष्य हुन् । छोटकरीमा भन्दा आफू एक सकिएर हजारौँ बालकहरुको भविश्य निर्माण गर्ने संकल्पहरु एकातिर छन्। तिनीहरु जस्ता देशभक्तहरुको राज्यले लेखा राखेको छ,छैन, थाह भएन। तर त्यो संकल्प सहितको गजेन्द्र उर्जा देशको लागि कति आवश्यक हो ? अब बहस बनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।
होचिमिन्ह,महाथिर,माओ,तेङ्,लिक्वानहरुको इच्छा शक्ति, कुशल नेतृत्व र गजेन्द्र सरहरु जस्तैको तपस्याले बनेको देश हो सिंगापुर , चीन वा मलेसिया। भियतनामको स्वाधिनता संग्रामबाट पनि नेपालले सिक्ने विषयहरु हुन सक्छन । भियतनाममा ७ वर्षको अमेरिकन आयातित युद्धले १० लाख भन्दा बढी मानिस मार्यो । यदि होचिमिन्हको राष्ट्रिय एकता जोगाउदै देश बचाउने दूरदृष्टि हुँदैनथ्यो भने भियतनाम या त नामेट हुन्थ्यो या दुई भागको संघर्षबीच जेनतेन अस्तित्वमा रहन्थ्यो।
समयको चुस्त योजना र दुरदर्शी नेतृत्वबीच देश निर्माणमा अमुल्य संयोगले विकसित राष्ट्रको निर्माण हुने हो । त्यसमा सामाजिक चेतनाको भूमिका अहम हुन्छ। चेतनाले आफ्नो बाटो आँफै फलाकिलो वा प्रयोग योग्य बनाउदै लग्छ। पुराना सबैकुरा रुपान्तरण हुँदै जान्छन र नयाँ मान्यताहरु स्थापित हन्छन। यहि हो सक्रिय सुधारको नियम। धेरै सुधारहरुको जोडमा मुलुकको आर्थिक,सामाजिक,भौतिक,सांस्कृतिक र बैचारिक कायापलट हुन्छ। जसलाई रुपान्तरण भनिन्छ। कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ कि युरोप कट्टरपन्थी क्याथोलिकहरुको नियन्त्रणमा रहेको भए अहिलेसम्म संसारमा फासिज्म मात्र बाँकी रहन्थ्यो। मानव सभ्यता, मानवता र श्रमबिचको विभेद रही रहन्थ्यो। नाइण्टिङ्गल, मार्केला,मदर टेरेसा,युरी गागरिन,प्रसिद्ध पत्रकार ग्लोरिया स्टेनेम,युरी कोचियामाहरु धर्मको कठोरताभित्र मारीइ सकेका हुन्थे। तर सभ्यताको क्रमिक विकासले त्यो रुचाएन।
संसारभरी चलेको प्रगतिशील जागरण (रेनेशा)ले क्रमश समाज परिवर्तन गरिरह्यो र अन्तमा बर्गीय विभेदको बुझाइले समताभावको संकल्पसहित विश्व बदल्ने चेतनामा छलांग मार्यो। त्यसैले परिवर्तनको दर्शनमा युरोपले संसारलाई नेतृत्व गरेको मानिन्छ। युरोपको प्रगतिशील चेत जसलाई सामुहिक हीतवादी सोच पनि भनिन्छ अहिलेसम्मको नेतृत्वदायी शक्ति हो। चाहे त्यो दार्शनिक क्षेत्रमा होस्, वा आर्थिक, सामरिक, साँस्कृतिक ।
युरोप निर्माण,पुननिर्माण र रुपान्तरणमा पनि लाखौँ कर्मबिरहरुको योगदान छ। जसको सुरुवात समर्पित क्रान्तिकारी नेतृत्वको योजनाबद्ध बिकासबाट भएको थियो । पञ्चवर्षीयदेखि आवधिक, दीर्घकालिक योजनाको शुरुवात सन् १९२१ मा सोभियत संघबाट भयो। जसलाई अहिले संसारले अपनाएको छ।
त्यसैले विकासको पहिलो सर्त नेतृत्व हो। जुन विशेष गुणले युक्त हुनु आवश्यक हुन्छ, त्यसपछि विकासको चरणबद्ध योजना मुलुक रुपान्तरणको दोश्रो सर्त हो।
नेपालको सन्दर्भमा दुख साथ भन्नु पर्छ ,सार्वजनिक बाटो मिचेर घर बनाउने, सार्वजनिक पार्क,जंगल तथा गौचरण आफ्नो नाममा नामसारी गरि घर बनाउनेहरुले पनि आफूलाई नेपाली नागरिक भएकोमा गजबले गर्व गर्दछन भने आफ्नो सर्वस्व मेटेर अरुको भविश्य बनाउन लागि पर्नेहरु पनि नेपालमा कतै गुमनाम तर अस्तित्वमा छन्। सरकारी जमिन मिचेर छोरीलाई दाइजो दिनेहरुपनि नेपालमा छन् भनेर समाचारमा पढिरहेका हुन्छौँ भने विना तलब आफ्नो हातका भाग्य रेखा मेटेर वर्षो समुदायका सन्तानहरुकोलागि खर्चने परोपकारी जर्ज पियाबोड़ीहरु पनि सीमाभित्र आफ्नै धुनिखुनिमा रमेका भेटिन्छन् ।
गरिवका झुपडी मिचेर आफ्ना बच्चाको लागि सम्पति जोड्ने हुन् वा अदालतमा झुटो मुद्धा जिताइदिने प्रलोभनमा पारेर घुस माग्नेहरु हुन्, देशमै रवाफसहित बस्दछन् ।
अर्को महत्वपुर्ण कुरा, अब पार्टीका केन्द्रदेखि स्थानसम्मका नेताहरुले कार्यकर्ताको र कार्यकर्ताले नेताको मुल्यांकन फाइल बनाइ राख्न जरुरी छ। जनतालाई पानि खुवाउन सदरमुकामदेखि पाइप बोक्ने र गोठमा डिङ्गालाई पानि खुवाउन राति त्यहि पाइप काटेर गरिब छिमेकीको घाँटी सुकाउने दुबै नागरिक र अनागरिकको लगत राख्ने बेला आएको छ।
देशबासीको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सम्वृद्धिकोलागि जिबन दिने र पैसा वा सम्पतिको लागि विना ज्ञान नक्कली प्रमाणपत्र बोकी अरुको शरिर चिरेर मार्ने हत्यारा यी दुवै थरि उत्तिकै सामर्थ्य र रवाफका साथ कसरी यो देशका नागरिक कहलिन्छन ? परोपकारमा आफ्नो गास काटेर निमुखालाई खाना दिने बाहेक जनताको करबाट किनिएको दवाई मुलोमा समेत कमिसन माग्ने राष्ट्रका नागरिक हुन सक्दैनन्। त्यसैले देशको लागि निस्वार्थभावले पसिना बगाइरहेका देवतातुल्य नागरिकहरुलाई राज्यले पहिचान गरि प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ भने दलाल, भ्रष्टाचारी र कमिसनखोरहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।
दक्ष नागरिकको पहिचान गर्न ढिला भएकोले नै योजना अनुसार राज्यले सफलता हाँसिल गर्न सकेको छैन। राज्यले देश भित्रका ति सबै देशभक्त सेवकहरुको लगत राखेर मात्र हुँदैन। सम्पर्कलाई नियमित बनाउदै उनीहरुको स्वाभिमानलाई उठाउनुपर्छ। नेपालका ५० सौं देशमा भएका दुतावासहरुलाई नयाँ काम दिनुपर्ने बेला हो यो । उनीहरुको कार्य क्षेत्रभित्र कति स्वास्थ्य बिज्ञहरु छन् ? निर्माण लगायत अन्य क्षेत्रका बिज्ञहरु कति छन् ? संसारभरिको दक्ष नेपाली जनशक्तिको डाटा निकाल्न सकिन्छ।
अहिले आएको कोरोना महामारीबीच चलेको छलफलले बेल्जियम मात्रै नभएर लगभग संसार भरका स्वास्थ्यकर्मीको डाटा संकलनलाई आधार प्रदान गरेको छ। पत्रकार महासंघका केही शाखाहरुले स्वास्थ्यकर्मीहरुसंग बहस नै चलाए। जसलाई नियोगहरुले आफ्ना होमवोर्कका कच्चा पदार्थको रुपमा ग्रहण गर्न सके मुलुकको लागि समेत फलिफाब हुने थियो।
पत्रकारहरुले कोरोना बिरुद्ध लडिरहेका नेपालीहरुको मनोबल गिर्न नदिन हौसला प्रदान गरिरहे। यो काम दुताबास वा नियोगले पनि गर्न सक्थ्यो, एनआरएनएले पनि गर्न सक्थ्यो। पहल अलिक पुगेन। जे होस् पत्रकारले शुरु गरेका यस्ता केही आधारमा टेकेर एनआरएन वा नियोगहरुले बिज्ञ लगतका बिषयमा आगामी होम्वोर्क गर्दै जान सक्छन्।
संसारभरिको अबस्था भयाबह छ। महामारीमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरिरहका विश्वभरका ९० हजार स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित भएका छन् भने लगभग ८ सय भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु भइसकेको अबस्थामा अमेरिका र युरोपमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मीहरुले युद्धस्तरमा काम गरिरहेका छन्। यी नेपाली स्वास्थ्यकर्मीका अनुभव नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि अत्याधिक महत्वपुर्ण हुन सक्छन।
नेपालले समृद्धिको अभियानमा चाहिने आबस्यक दिमाग नेपालीसंगैबाट प्राप्त गर्न सक्ने अबस्था छ । युरोप, एसिया लगायत मध्यपुर्वमा ठुलाठुला भवन,पुल र रंगशालाहरु निर्माण गर्ने शिल्पी, प्रयटन बिज्ञहरु, कुसल कारिगढ़, पल्म्बर, आइटी, कृषि,जीव,भौतिक र स्वास्थ्य बिज्ञहरु संसारभरि छरिएर आफ्नो सीप बेची रहेका छन् । नीति बनाएर मुलुक निर्माणमा योगदानको लागि बोलाएमा उनीहरुमद्धे धेरै नेपाली बिज्ञहरु नेपाल फर्किन सक्छन् ।
दक्ष जनशक्ति प्राविधिक जनशक्तिका हिसावले नेपाल अब गरिव छ भन्न मिल्दैन । बेल्जियम लगायत युरोपमा मात्रै नेपाली स्वास्थ्य बिज्ञ ६ हजार भन्दा बढि छन् । निर्माण बिज्ञ १७ सय भन्दा बढी छन्। अन्य स्पर्टिजहरु त्यस्तै संख्यामा छन्। अमेरिका, क्यानाडा, मध्यपूर्वमा यस्ता विज्ञहरु अझ धेरै छन्। राज्य समृद्धिको गुरु योजना चुस्त हुने हो र उपयुक्त आधार तय गरेर नेपाल बोलाउने हो भने मुलुकको निर्माण अभियानमा स्पर्टिजहरुको कमी हुँदैन।
निराशा र आशाविच द्वन्द
जति समृद्धिका गफ गरेपनि नेपालमा भ्रष्ट कर्मचारीहरुको समेत कमि छैन। डायस्पोरामा पनि केहि अपराधि मानसिकताका नेपालीहरुले धेरै सुन्दर मनहरुलाई कलंकित बनाइरहेका छन् । मुलुकको तुलनामा प्रवासमा त्यस्ता क्रियाकलाप यदाकदा देखिन्छन् । भूकम्पको बेला पनि त्यस्तो अवस्था देखियो । प्रवासमा अमूल्य श्रम बेचेर परोपकारीहरु मार्फत सहयोग पुर्याउने कर्म पनि उत्तिकै भैरहेका छन् । यी कदमहरुले हाम्रो समाजमा जलिरहेका आशाका दियोहरुलाई अझैसम्म निभ्न दिएका छैनन् ।
नेपालमा जस्तै डायस्पोरामा पनि हाम्रा प्रवृतिका राम्रा नराम्रा प्रवृतिबिच निरन्तर द्वन्द चलिरहेको हुन्छ। डायस्पोराका नेपालीहरुलाई आफ्नो बन्धु सम्झेर भावनामा देश र आत्माभित्र सीमा खोज्ने प्रक्रियाको शुरुवात आउँदो समयको माग हो। यहि सुत्रले नै संसारभरका नेपालीहरुलाई दिर्घकालसम्म जोडी रहने छ।
अन्त्यमा, टिमोर वा फिजीमा आधुनिक उखुखेतीका नेपाली सिप, मकाउका पर्यटकीय कौशल, कोरियाको औद्योगिक सुत्र ,युरोप र अमेरिकाका स्वास्थ्यकर्मीका संक्रमण महायुद्धका अनुभवहरु, मध्यपूर्वको निर्माण कला र जापानी तरक्की को फ्युजनले बिस्तारै नेपालमा पनि समृद्धिका आधार बन्न सम्भव देखिन्छ। कालीको बगरमा भेटिने सुनका टुक्रा जस्तै यी कौशलकर्मीहरुलाई संसारभरीबाट जोड्न सके मुलुकको समृद्धि देख्न अर्को पुस्ता पर्खनु पर्ने थिएन ।
प्रवासी नेपाली एकता मञ्च अष्ट्रेलिया क्वीन्सल्याण्डको संयोजकमा पाण्डे
कोरोना संक्रमणबाट विदेशमा थप ३ जना नेपालीको मृत्यु
ओलीलाई प्रवासी मञ्च डेनमार्कको समर्थन
कोरोना संक्रमणबाट बेलायतमा एक जना नेपालीको मृत्यु
२०७८ सालको पात्रो स्वीकृत, एकै वर्ष कसरी पर्यो तीन वटा दशैं ?
प्रधानसेनापति थापाले लगाए कोभिड–१९ खोपको पहिलो डोज
मन्त्रिपरिषदको बैठकका यस्ता छन् ३२ वटा निर्णयहरु
विधि र पद्धतिले संसदीय दलको नेता फेर्नुस्, डेढ वर्ष प्रतिपक्षमा बसौँला: प्रधानमन्त्री ओली
बालुवाटारको नाम भजाएर गृह सचिवले के–के गरे ?
एचआर सोलुशसनका सञ्चालक पौडेल ठगी मुद्दामा पक्राउ
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरू हटाउने चेतावनी
खोप लगाएको तीन सातासम्म कोराना संक्रमणको जोखिम, खोप लगाएका व्यक्तिमा संक्रमण
नेकपामा सांसद तानातान, विभिन्न प्रलोभन
नेकपा विवादले संसद् व्यवस्थापन कठिन
गरिबी निवारणमा अलमल
२ महिनामा घट्यो २ खर्ब तरलता
ज्येष्ठ नागरिकको बजेटबाट जनप्रतिनिधिको घुमफिर